BUYAAS Banyere Anyị - Anabolics Steroids Nsukka
Luohe Hengfei Biological Technology Co., Ltd., nke a chọtara na 2008, bụ ụlọ ọrụ na-emepụta ọgwụ na nkà na ụzụ nke dị elu iji jikọta mmepụta, R & D na ahịa. Ọ na-ebute na Luohe Chemical Industry Park, na-eme nnyocha na mmepe nke ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọgwụ, na-enye ngwaahịa ọhụrụ na ọrụ dị elu maka ụlọ ọrụ ọgwụ.
Hengfei Biotechnology nwere usoro siri ike nke biotechnology, teknụzụ kemịkal na nyocha nyocha, na-elekwasị anya na mmepe nke API, ndị na-etinye aka na kemịkal dị mma, na-enye ọrụ dị elu CRO, CMO ọrụ na nyocha nyocha na ọrụ nyocha nke ọma maka ụlọ ọrụ dị iche iche.
Hengfei Biotechnology nwere otu onye nlekọta ahụmahụ na ìgwè R & D mbụ, gụnyere ọtụtụ ndị ọkachamara pụtara ìhè na ngalaba nke usoro mmepụta ọgwụ na mmepụta ọgwụ. Ọ maara nke ọma na ịsọ mpi dị mkpa na mpaghara ndị a nke nkà na ụzụ, nkà na ụzụ sịntetik, ịzụ ọgwụ ọgwụ, bioengineering, wdg. Ndị ahịa na ndị mmekọ ụlọ ọrụ na-abịa n'akụkụ ụwa dum, na-emekọrịta mmekọrịta dị iche iche na ọtụtụ ụlọ ọrụ ọgwụ na North America, Europe, India na China.
N'iji nduzi nke "Nhazi mma, Onye Ahịa, Ọrụ Ezigbo, Uru Uru", Hengfei Biotechnology Co., Ltd. na-enye ndị ahịa ngwaahịa dị mma site na nyocha zuru oke na ọrụ dị elu.
Jiri ezi obi na-atụ anya ịkwado gị ma nweta mmeri win2win n'ọdịnihu!
CEO, Onye na-emepụta ihe
nkà na ụzụ na-emepụta ọgwụ ndị dị elu iji nweta mmepụta, R & D na ahịa.
Ọrụ CRO, ọrụ CMO
Ọrụ Nchọpụta Ọdịmma
enwe usoro siri ike nke biotechnology, teknụzụ kemịkal na nyocha nyocha, na-elekwasị anya na mmepe nke API, ndị na-etinye aka na kemịkal dị mma, na-enye ọrụ dị elu CRO, CMO na nyocha nyocha na ọrụ nyocha nke ọma maka ụlọ ọrụ dị na ụlọ ọrụ ahụ.
Anyị nwere ụlọ nyocha kachasị elu na akụrụngwa, ndị ọrụ R & D kachasị elu na ndị ọrụ nchịkwa.
ISO9001: Asambodo 2000 na GMP.
Ndị bara uru
Debanye aha iji nweta ozi kachasị ọhụrụ gbasara ụlọ ọgwụ anyị.
Ị ga-enweta ozi ọhụrụ na bonuses.